2021 Capricorn Horoscope - I-Capricorn
IHoroscope yoNyaka yeCapricorn ngo-2021 x
Umoya:EzoMoya, iCandelo, ibhalansi, ikhefu.
Iindawo zokundwendwela emva kobhubhani:KwaSirayeli, kwiRiphabhlikhi yaseMzantsi Afrika, eAlaska.
Izinto onokuzifunda:Umdaniso we-Ballroom, uLawulo loMngcipheko, i-Financial Astrology.
Wenze izinto ezininzi zokuzinzisa ezifunekayo kwiinjongo onqwenela ukuguqukela kuzo ngo-2021. Sekunjalo, izakhono kunye nokuzithemba kuyavavanywa unyaka wonke, kunye nokuguquguquka kwakho kunye nokubanakho ukuthatha imingeni emitsha kunye nokujongana noxinzelelo. Ukucinga okutsha kuyafuneka kuyo nayiphi na inzame yobuchwephesha kunye nokungafani phakathi kwabantu malunga nokukhanyisa izibane ezibomvu njengeyona ngxaki iphambili kunye nomthombo oyintloko wokungquzulana kwiinyanga ezizayo. Kwelinye icala, zezoyantlukwano ezenza amava akho atyebe kwaye avule iingcango zokuzivelela komntu kunye notshintsho onqwenela ukulwenza ngokwenene.
Kufuneka uzive wamkelekile eluntwini lo gama kwangaxeshanye umile uzingca ngawe nokuba umntu uthini na. Iinkqubo ziya kuphuka kwaye ukungahloneli kuza kunye namadabi athile, kodwa ihlabathi lomoya liyakuxhasa ukuba ufunde, wandise, uhlolisise, kwaye wenze into enobungozi eya kuhlawula ukuba unomonde ngokwaneleyo. Ubuhlobo bexesha elide buya kuvavanywa ukuhambelana. Hlala uthembekile kwaye uvule utshintsho kunye nemigama emitsha eyimfuneko ukugcina intlonipho. Amabali othando anokukhula ngeyona ndlela ingaqhelekanga, phakathi kwabahlobo abalungileyo nalapho ungalindelanga ukuba afumaneke khona. Yonwabela i-rollercoaster kwaye ungavumeli uxinzelelo luphumelele xa ungasebenzisa imeko ngeyona ndlela ingcono.
Zama ukungazicingeli izinto. Amazwi athethwayo akhokelela ekungaqondani okunokulungiswa kuze kubonakale kungaguquki. Thetha ingqondo yakho kwaye umamele into ethethwayo phakathi kwemigca, ukuze ungakhukuliseka kukutolika engqondweni yakho okukude nabo bangazange babe neenjongo ezimbi kwaphela. Ukuphela kukaJuni kunye nokuqala kukaJulayi kuzisa imingeni kwihlabathi lakho leemvakalelo, isini, umtshato, okanye ubudlelwane obekufanele buhlale ubomi bakho bonke. Shiya indawo yokufunda ngabanye yonke imihla kwaye ulumke ungathabathi nantoni na okanye uthatyathwe lula.
Ekupheleni konyaka, kuyacaca ukuba uthando kunye nobuhle banendawo yabo yokwenyani kunye nechukumisekayo kwihlabathi lakho. Awusayi kuphinda unqwenele ukuhlala phantsi kwento oyaziyo ukuba uyayidinga kwaye uyifanele kwaye imiba yokuzithemba iya kugungqiswa kude kube sekupheleni de ube uyamkela ngokupheleleyo. Eli lixesha apho ukuzithanda kuba yeyona nto ibalulekileyo kwaye yintoni ekwahlulayo kwinkqubo kwaye isihlwele siyakwenza uzive umhle kwaye ufanelekile kuzo zonke ezo njongo zikhuthazayo kwaye zivela kumbindi wakho wokwenyani.
Intamo, umqala kunye nomsebenzi wedlala lengqula unokuphazamiseka kukungakwazi ukuzichaza ngokukhululekileyo nokuthetha ingqondo yakho ngokuphandle. Zama ukuba ungaginyi iimvakalelo kwilinge lokuba nengqiqo kwaye ube lukhuni, ukufunda kubantu abakungqongileyo abathathela ingqalelo intliziyo yabo njengoko unikeziwe. Khululeka isifuba, phefumla, kwaye wenze indawo yokuba intliziyo yakho iphile. Iimvakalelo ezingcwatyiweyo zinokukhokelela kuphindaphindo lwequbuliso lwezigulo ezingapheliyo obucinga ukuba ukwazile ukuzisombulula. I-yoga, i-pilates kunye nazo zonke iintlobo zeendlela zokuzolula zamkelekile kwaye ziphucula ukuguquguquka ngokomzimba nangokwengqondo. Khetha ezinye iindlela zonyango kunye nothintelo kwaye ulinge ngazo ngelixa uxhomekeke kwithuku.
Umlawuli weLanga lakho ungena kumqondiso we-Aquarius, ekhokelela kumzabalazo kunye namandla aphikisanayo kunye nokungafani nabantu abasondeleyo kuwe yonke imihla. Eli ayililo kanye ixesha lothando oluzinzileyo kunye namabali osapho ukuba akukho nkululeko yaneleyo kubo. Abantwana banokuvukela isakhiwo sakho, izithethe zinokwaphulwa okanye zingahlonelwa, kwaye ukunyamezela kwakho kufuneka kufunyanwe kuvelwano nokuqonda endaweni yokubamba inzondo okanye wenze izinto ngokungakhathali kwabo ubathandayo.
Imida kufuneka yamkelwe kwindawo yobuqu ukuze umntu ngamnye abe nendlela yakhe kunye nomgca wokhetho. Uxinzelelo oluninzi lunokukhokelela kuqhekeko kwaye ukukhangela inkululeko kunokuthatha wonke umntu kumacala ahlukeneyo kwaye wenze umgama apho ungathanda ukuziva usondele. Ngakolunye uhlangothi, eli lixesha elihle lokwabelana ngesondo, ukulandela ithuku lakho kunye nokuphulaphula intshukumo yendalo yomzimba wakho. Nangona uhlakaniphile okanye unyanisekile kwizinto ezithile kwixesha elidlulileyo, unethuba lokunqoba ingxabano kunye nentshukumo elula, ukuphulaphula i-hunch yakho, kunye nokubona ubunyani bexesha elidlulileyo labanye abantu abazisa kwimiba abayithwala emagxeni abo.
Imingcipheko emikhulu inokukuvavanya kwaye ikutyhale ugqithe amatyeli aliqela ngo-2021. Iimali zinokuqhakaza kwinyanga enye kuphela ziphele kwelandelayo, kwaye kufuneka ulumkele ukonga into ecaleni kuwo nawuphi na umvuzo okanye inzuzo yokusebenzela. Kwelinye icala, ukugqabhuka kwemfuno yeemvakalelo kuya kukukhokelela kwicala elingaqhelekanga, kukutyhale ukuba uchithe ngaphezulu ukuze ukhumbule ingqiqo yakho eqhelekileyo kunye nokuba sengqiqweni kwesiqhelo. Uya kufumanisa ukuba eyona nto uyidinga kakhulu kukulungelelana. Intsebenziswano kunye neeprojekthi ezizimeleyo ziya kwahluka kakhulu, kunye neendawo eziphakathi kunzima ukuzifumana. Chitha ixesha elaneleyo uwedwa ukuqonda isikhundla sakho ngokucacileyo kwinqanaba ngalinye lendlela.
Gemini Khetha Uphawu Leo Pisces Aries